मनोज घिमिरे काठमाडौं, १८ वैशाख
संसारमा मानवअधिकारको दुहाइ दिने देश अमेरिकालाई कोभिड- १९ ले क्षतविक्षत गराएको छ । चीनको अवस्था फरक छ र ठीक फरक अवस्था उत्तर कोरियाको छ ।
सुरुमा यो भाइरस निस्किएको देश चीन साम्य हुँदा अमेरिका आक्रान्त छ । कठोर शासन मानिएको भियतनाममा यस संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन ।
प्रसंग नेपालको ।
आमनेपाली यो संक्रमणको भयमा रहँदा सरकारको भने कुनै चासो थिएन । भारतको खुला सीमाबाट निर्बाध नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम जारी रह्यो । सरकारले क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गरेन । हवाई मार्गबाट अउनेलाई समेत एउटा थर्मल गनबाट जाँच गर्ने र पठाउने प्रचलन थियो ।
चैतको सुरुमा सरकारले केही चासो दिएझैँ देखियो । १० चैतमा फ्रान्सबाट नेपाल फर्किएकी एक युवतीमा यो संक्रमण पुष्टि भयो । नेपालीको भाग्य नै मान्नुपर्छ, ती संक्रमित युवती एकदमै सचेत परिवारकी थिइन् र उनी आफू पनि त्यतिकै सचेत ।
सरकारले त्यसको भोलिपल्टदेखि लागू हुनेगरी लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । लकडाउन पनि १ महिना नाघेको छ ।
यस लकडाउनका बीच केही घटना भए । उदयपुर ‘हट स्पट’ बनेको छ अहिले । जनकपुरमा पीसीआर टेस्ट मेसिनको विश्वसनीयता गुमेको छ । वीरगञ्जमा संक्रमण थपिँदो छ । काठमाडौंमा र्‍यापिड टेस्टमा पोजेटिभ (इटालीबाट फर्किएकी) महिलाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । यसको अधिक सम्भावना हो, उनी कोरोना संक्रमित भएर निको भएकी हुन सक्छिन् ।
थुप्रै जना यस्ता देखिए, जसको र्‍यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिए पनि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ देखियो । यसको मतलब ती धेरै संक्रमित भएर ठीक भए । यसो हुँदा उनीहरूको सम्पर्कमा आएका सबैको परीक्षण भएको छैन ।
यो सबै तथ्याङ्कले भन्छ- हामी अझ असुरक्षित छौँ र जोखिममा पनि । त्यसो भए सुरक्षित हुन के गर्ने ? उपाय के हो ? यदि लकडाउन थप्ने हो भने सधैँ लकडाउन मात्र गरेर सम्भव हुन्छ ? अनि लकडाउनकै समयमा समुदायमा फैलिएकोे पनि छ ।
निचोड के हो भने लकडाउनको समयमा हामी अनुशासित नभएका कारण समस्या थपिएको हो । यो समस्या अझ बल्झिन सक्छ । लकडाउन खोल्दा जोखिम अझ बढ्न सक्ने, नखोल्दा पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन लागू नहुने र सधैँको जनजीवन कष्टकर हुने ।
यसबीचमा धेरै क्षेत्रमा राजनीतिक रूपमा स्थानीय नेतृत्व नराम्ररी चुकेको छ । बीचमा काठमाडौंमा संक्रमित नदेखिएका कारण खुलमखुला लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको भीड बढेको छ ।
यहाँ एउटा मानसिकताले अड्डा जमाएको छ- ‘हाम्रे आफन्त, इस्टमित्रलगायत सबै भाइरस प्रुफ शरीर भएका हुन् । उनीहरूलाई त छुँदैन ।’
यसबीचमा त शिक्षित र प्रतिष्ठित भन्नेले आँकलन गर्न थाले- ‘काठमाडौंमा त यसको असर नै छैन ।’
हो, असर नहुँदा धेरै राम्रो तर लकडाउनको अनुशासन पालना गर्दा घाटा कति ? समाजलाई निर्दिष्टि गर्ने व्यक्तिको भूमिका नै खराब देखिएको छ, धेरै ठाउँमा ।
यस अवस्थामा भन्नै पर्ने हुन्छ- लकडाउन नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन असफल देखिएको छ ।
नेपालका पछिल्ला घटनाक्रमले के देखाएको छ भने यदि हामी १ महिना अनुशासित भएका थियौँ भने हामी कोरोनामुक्त भनेर घोषणा गर्ने अवस्थामा हुन्थ्यौँ । विदेशमा रहने नेपालीलाई भित्र्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र अन्य नेपाली नियमित दिनचर्यामा फर्कने अवस्थाको नजिक थियौँ । अब त लामो समयका लागि त्यो सम्भव छैन । कारण- यसबीचको लकडाउन उल्लङ्घन नै हो ।
अझ पनि उपाय एउटै हो- लकडाउनमा सेनाको प्रयोग, जसले कोरोनालाई परास्त गर्न सकोस् । केही अप्ठ्यारोमा पर्नेलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएर सेनाको उपस्थितिमा कडाइका साथ लकडाउन लागू गर्ने, सीमामा सेना परिचालन गर्ने र विदेशबाट आएकालाई सिधै क्वारेन्टाइनमा राख्ने । अन्यथा नेपालीको जनजीवन चाँडै सामान्य बन्ने अवस्था देखिँदैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १८, २०७७, १५:०६:००